Wasiir Waayeel oo ka hor yimid xil ka qaadista lagu sameeyay | KEYDMEDIA ONLINE
Wasiir Waayeel oo ka hor yimid xil ka qaadista lagu sameeyay
Wasiirkii Arrimaha Gudaha Galmudug, ayaa ka hor yimid xil ka qaadisitii lagu sameeyay, wuxuuna billaabay olole uu doonayo in dib loogu soo celiyo jagadii uu hayay.
DHUUSAMAREEB, Soomaaliya - Cabdi Maxamed Jaamac ‘Cabdi Waayeel’, oo shalay laga qaaday xilkii uu ka yahay Maamulka Galmudug, ee Wasiirka Arrimaha Gudaha, ayaa ka hor yimid xil ka qaaditaas, wuxuna wax kama jiraan ku tilmaamay eedhaha howl-gudasho la'aanta ee loo soo jediyay.
Waayeel, wuxuu sheegay in sharciga u yaalla Galmudug uusan ogolaaneynin, in Madaxweyne ku xigeenku xil ka qaadis ku sameeyo wasiir, isla markaana dhismaha golaha deegaanka Balanbale ay ku shaqo leedahay Wasaaradda Arrimaha gudaha Galmudug, waxna ka quseyn Madaxda sare.
Cabdi Maxamed Waayeel, ayaa lagu eedeeyay inuu qalaaso ka abuuray degmada Balanbal ee waqooyiga gobolka Galgaduud, kadib markii uu dhishay Gole Degaan oo aan looo dhamayn, taas oo sababtay in gacan ka ahadal uu ka dhaco magaalada.
Waayeel, wuxuu ka mid ahaa Wasiiro uu Farmaajo geeyay GM, xilligii doorashada Qoorqoo4, waxaana hadda socda olole ay Madaxtooyada Soomaaliya ku doonoayso in dib loogu soo celiyo xilkiisa, inkastoo Madaxweyne ku xigeynka Cali Ciid uu iska fogeeyay inuu dib ugu soo celsho xilkiisii.
Galmudug ayaa wajahaysa khilaafyo siyaasadeed iyo colaad beeleedyo, iyadoo Qoor-Qoor uu noqday nin ka maqan xafiiskiisa shaqo ee Dhuusamareeb, waxaana lagu eedeeyay inuu saldhig ka dhigtay Muqdisho, islamarkaana noqday nin u shaqeeya Villa Somalia.